सफलताको कथा! खाजापसल देखि फोर स्टारसम्म !! - Inquiry Nepal
सफलताको कथा! खाजापसल देखि फोर स्टारसम्म !!
कुनै पनि पेशा, व्यवसाय गर्न लगानी या वातावरण भएन भन्दै विदेश पलायन हुनु यतिखेर आम नेपालीको प्रवृत्ति नै बन्दै छ । विदेश पलायन हुनेहरूले उता पुगेर गुनासो गर्न थाल्छन्, नेपालमा अवसर नै छैन । तर स्वदेशमा बसेर मेहिनेत गर्ने हो भने धेरै कुरा सम्भव छ भन्ने कुरा यहाँका एक व्यवसयीले उदाहरणका रूपमा नै देखाएका छन् ।
नेपालीको भविष्य विदेशमा नभइ जे गर्नु छ स्वदेशमै छ र आफ्नो सोच कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालमा खुसीले बस्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन्– हुँगा–९, गुल्मीका लक्ष्मण न्यौपाने । विदशको ठूलो कमाइ भन्दा स्वदेशको कमाइ थोरै किन नहोस्, त्यो निकै मूल्यवान र फाइदाजनक हुन्छ भनेर देखाइदिएका छन्, न्यौपानेले ।
सानै उमेरमा भारत भासिएका न्यौपाने विदेशी रोजगारीले उमेर छउन्जेल ‘जागिर’ बाहेक केही दिँदैन भन्दै स्वेदश फर्केर सुरु गरेको उनको होटल व्यवसाय यतिखेर एक सफल चेन बिजनेशका रूपमा सफललता पाइरहेको छ । उनले होटल व्यवसाय सुरु गरेको १८ वर्ष पुग्दै गर्दा उनका देशभरि छरिएका १३ होटल, रिसोर्ट सञ्चालनमा छन् भने झन्डै हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
२०५४ सालमा आफ्नो गुजारा चलाउन सुरु गरेको होटल व्यवसायलाई व्यवसायिक रूपमा विस्तार गर्दा अहिले ‘सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी’ का नामले उनको व्यवसाय देशभरि प्रख्यात छ । बर्दियाको राजापुरबाट चटाई (मान्द्रो) र नेपालगन्जबाट त्रिपाल खरिद गरेर कैलालीको टीकापुरमा फास्टफुड सुरु गरेका न्यौपानेको यतिखेर टीकापुर, चिसापानी, नेपालगन्ज, सुर्खेत, बुटवल तथा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा १३ होटल, रेस्टुरेन्ट चलिरहेका छन् । अन्य स्थानमा पनि होटल, रेस्टुरेन्ट विस्तार गर्ने क्रम जारी छ उनको ।
‘पछिल्लो समयमा नेपालगन्जको तीनतारे होटललाई चारतारे र चुम्लिङटारमा रिसोर्ट बनाउने काम सकिएको छ,’ उनले भने । ती काम सकिनेबित्तिकै जुम्लामा ‘जिरो कार्बनयुक्त होटल सुरु गर्ने उनको योजना छ ।
राजापुरबाट चटाई (मान्द्रो) र नेपालगन्जबाट त्रिपाल किनेर टीकापुरमा फास्टफुड सुरु गरेका न्यौपाने अहिले टीकापुर, चिसापानी, नेपालगन्ज, सुर्खेत, बुटवल तथा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा १३ होटल, रेस्टुरेन्टका मालिक हुन् ।
‘२०५४ माघ २३ गते आफैँ मःम र चाउमिन बनाएर होटल सुरु गरेको हुँ । जबकि त्यतिबेलासम्म मैले मःम खाएकै थिइनँ । त्यही ठाउँमा रहेको मःम पसलमा गएर आधा प्लेट मःम खाएर, बनाउने तरिका सिकेर व्यवसाय सुरु गरेको थिएँ,’ उनले सुरुआती सम्झना बाँडे ।
न्यौपाने होटल व्यवसाय सुरु गर्नु अघि रोजगारीका लागि भारत पसेका थिए । ‘नेपालमा कुछ नही है…’ भन्दै विदेश पसेकोमा उनलाई अहिले आएर ग्लानि हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा सबथोक रहेछ । केवल हामीले नबुझ्दा अभाव, बेरोजगारी भइरहेको रहेछ ।’ स्वदेशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले होटल व्यवसाय सुरु गर्दा सफल भएझैं अन्य व्यक्तिले अन्य काम इमानदारीपूर्वक गर्ने हो भने देश विकास कसैले रोक्न नसक्ने उनको भनाइ छ । सुरुमा होटल चलाउने निर्णय गर्दा उनीसँग लगानी पनि थिएन ।
‘भिनाजुसँग ४० हजार र ससुरासँग १० हजार रुपैयाँ ऋण सापटी लिएर सुरु गरेको हुँ,’ उनी निर्धक्क सुनाउँछन् । टीकापुरमा एक वर्षजति संघर्ष गरेपछि उनी होटल विस्तार अभियानमा लागे । २०५६ असारमा सोही होटललाई सिद्धार्थ नाम राखे । त्यसयता पनि उनी सिद्धार्थलाई च्यानल व्यवसाय बनाउन क्रियाशील रहे । सोही क्रियाशीलताले अहिले उनलाई सबैतिर वाहवाही दिलाइरहेको छ ।
स्रोतसाधनका दृष्टिकोणले जसरी नेपालमा केही गर्न सकिने सम्भावना छ, त्यसरी नै सरकारी निकायबाट भने थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको उनको अनुभव छ । ‘नेपालमा राम्रो गर्न खोज्नेलाई सहयोग गरौं भन्ने होइन, कसरी तल झारौं भन्ने सोच पनि व्यापक छ,’ उनी गुनासो गर्छन् । सरकारी नीतिनियम व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्ने उनको जोड छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा उद्योगधन्दा काम गर्ने मजदूरबाटै ध्वस्त पारिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यसका लागि पनि उद्यम टिकाउ पार्ने सूत्र न्यौपानेले फेला पारेका छन् । १८ वर्षे हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लोभलाग्दो प्रगति गरेका न्यौपाने भन्छन्, ‘चाँडै प्रगति गर्नु छ भने कामदार होइन, साझेदार खोज्नुस् ।’ त्यसैले उनी हरेक वर्ष आफूसँग काम गरेका कर्मचारीलाई साझेदारका रूपमा थप्दै छन् । उनलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ– सफल हुनुको कारण कामदारलाई उनीहरूको क्षमताअनुसार कम्पनीको सेयर दिएर ‘कामदार’ भन्दा पनि साझेदार बनाउनु नै हो कि ? उनले आफ्ना कर्मचारीसँग गर्ने व्यवहार पनि साथीकै जस्तै छ । कर्मचारीलाई कहिले पनि जागिर खान आएको नठानेका कारण यतिखेर उनको होटल, रेष्टुरेन्टमा काम गर्नेले उनी भन्दा ती व्यवसायलाई माया गर्ने गरेको न्यौपाने बताउँछन् । ‘व्यवसाय सफल हुन जति लगानीको खाँचो हुन्छ, त्यति नै श्रमको पनि महत्व हुन्छ,’ उनले भने, ‘मेरो व्यवसायमा श्रम र लगानीको बराबर हिस्सा छ ।’
उनको अनुभवमा नेपालमा व्यवसाय गर्दा सफल हुने सम्भावना बढी छ । नेपालमा प्रतिस्पर्धा कम भएकाले व्यवसाय गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ । नेपाल विकासको क्रममा रहेकाले धेरै सम्भावना रहेको न्यौपानेले बताए ।